Photos Sida loo kaabta ka iPod
> Resource > iPod > Sida loo kaabta Photos ka iPod
Qorshuhu wuxuu ahaa in ay u hagaagsan sawirada gal aan iPod taabashada iyo iyaga guuriso computer shaqada. Waxaan leeyahay Lugood on computer, laakiin ma ka heli kartaa si aad u hesho sawirada gal computer shaqada.
Haddii aad ku rakibtay Lugood on your computer, waxaad si fudud karaa hagaagsan sawiro si aad iPod . Laakiin waxa aad u adag tahay in sawiro gurmad ka iPod si aad u computer, sababtoo ah Lugood ma ha u samaynaysaan. Dhab ahaantii, si hawsha ay u dhammaystiraan, mid ka mid ah hab fudud oo ku habboon waa in la isticmaalo a smart iPod inay kala iibsiga computer - Wondershare TunesGo ama Wondershare TunesGo (Mac) . Waxa aad ku xoojiya sidii ay gurmad iPod oo duudduuban camera, maktabadda sawir oo albums oo kale si aad u computer fudayd.
Photos Sida loo gurmad ka iPod
Qaybta soo socda inta badan sharxayaa sida loo raad raac sawiro aad iPod si aad u computer socda Windows OS. Download iPod si kala iibsiga computer on your computer. Markaas, u tag iyada oo qayb ka mid hoose.
Fiiro gaar ah: The version Windows si buuxda u la jaan qaada iPod xiriiri 5/4/3 macruufka socda 6 / macruufka 5 / macruufka 7 / macruufka 8 / macruufka 9, iPod nano 7/6/5/4/3/2/1, iPod classic 3/2/1 iyo iPod shaandheyn / 4/3/2/1. Iyadoo TunesGo Wondershare ah (Mac) oo kaliya taageeraa iPod xiriiri 5/4 socda ee macruufka 5, macruufka 7, macruufka 8, macruufka 9 ama macruufka 6.
Tallaabada 1. Calan aad iPod ka dib markii socda barnaamijkan
Si aan ku bilaabo, rakibi iPod si kala iibsiga PC on your computer. Waxa maamula. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPod aad PC. IPod in PC kala iibsiga Tani waxay si deg deg ah lagu ogaan doonaa iPod. Markaas, files aad iPod, sida music, sawiro, ayaa la soo bandhigi doonaa khaanadda tagay.
Fiiro gaar ah: Haddii aad ka hesho suuqa kala rakibo Lugood aad kombuutarka markii socda Wondershare TunesGo, waa in aad raacdo suuqa kala rakibo si loo soo dajiyo Lugood on your computer.
Tallaabada 2. kaabta iPod sawiro
Tiirka tagay, guji "Sawirro" tab inay soo qaadaan suuqa kala maamulka sawirka. Dhammaan albums aad iPod la soo bandhigi doonaa guddi saxda ah. Dooro albums aad doonayay oo guji "Dhoofinta in". Haddii aad go'aansato in gurmad sawirada qaar ka mid ah, waxa aad furan kartaa album iyo xulo sawiro la doonayo ka dibna riix "Dhoofinta in".
Marka uu furmo suuqa file browser soo booda, aad u baahan tahay si ay u dejiyaan meel aad kombuutarka in lagu badbaadiyo sawirrada dhoofiyo ama albums.
Waa hagaag, in ay tutorial ah oo ku saabsan taageero ilaa sawiro ka iPod taabto. Hadda, raaxaysan photos on your computer.
Reading dheeraad ah:
Ka sokow taageerto kor u sawiro ka iPod, aad wax dheeraad ah la iPod u samayn karaa si loo kala iibsiga PC:
Bedelka music iyo playlists ka iPod in aad PC : Barnaamijka Tani waxay kuu ogolaanaysaa in aad ka iPod taabto, nano iPod, shaandheeyn lagu iPod iyo classic iPod wareejiyo files music si aad u computer.
Bedelka iyo badalo videos in iPod : Barnaamijka Tani waxay kaa caawinaysaa in aad wareejin oo loogu badalo jecel videos aad si aad iPod u riyaaqayaa waqti kasta iyo meel kasta.
Sida loo hagaagsan Photos in iPod
Sida loo saar buugaag ku iPod
Sida loo Delete Music ka iPod in Dufcaddii
iPod taaban shawladda kaabta: Waraaqda hayaan ee iPod xiriiri 5/4